News & Activities | MPMDMA
Phone : (95-9)44466 6796, Email : [email protected]
Alidac Healthcare (Zydus)
BPI (Ywar Thar Gyi)
FAME Pharmaceutical Industry
Pacific Medical Industries Ltd.
Progress Biochem Co., Ltd
RVK Meditech Co.,Ltd.
Zifam Pyrex Myanmar Co. Ltd
Myanmar Jick-Young Co.,Ltd
Basic Good Manufacturing Practice Course Batch (1)
မြန်မာနိုင်ငံဆေးနှင့် ဆေးပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများအသင်းမှ ဖွင့်လှစ်သော “ကောင်းမွန်သောဆေးဝါး ထုတ်လုပ်မှု အခြေခံနည်းစဉ်များပို့ချရှင်းလင်းမှု အမှတ်စဉ်(၁)” ကို (၁၃.၇.၂၀၁၉) ရက်နေ့မှစ၍ (၃.၉.၂၀၁၉) ရက်နေ့ထိ အပတ်စဉ် စနေနေ့နှင့် တနင်္ဂနွေရက်နေ့များတွင် သက်ဆိုင်ရာဘာသာ ရပ်များကို သက်ဆိုင်ရာဌာနမှ အရာရှိများ၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ....
MEDEX ‘ 19 & MYANLAB ‘ 19 Exhibition Co-organizor with MPMDMA
AMB Tarsus Event Group မှ ကြီးမှူးကျင်းပပြီး မြန်မာနိုင်ငံဆေးဝါးနှင့်ဆေးပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများ အသင်းမှ ကူညီပံ့ပိုးမှုတို့ဖြင့် ကျင်းပသည့် MEDEX/MYANLAB 19 (Myanmar’s Official International Medical & Pharmaceuticals Equipment & ....
FDA ၏ ဆေးဝါးနှင့်ဆေးပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်းများနှင့် ပတ်သက်၍မူဝါဒများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ သိကောင်းစရာများ ရှင်းလင်းဟောပြောပွဲ
မြန်မာနိုင်ငံဆေးဝါးနှင့်ဆေးပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများအသင်း (MPMDMA) မှ ကြီးမှူးကျင်းပသည့် “မြန်မာနိူင်ငံ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၏ ဆေးဝါးနှင့်ဆေးပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ခြင်း၊မှတ်ပုံတင်ခြင်းများနှင့်ပတ်သက်၍ မူဝါဒများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊သိကောင်းစရာများရှင်းလင်းဟောပြောပွဲ” ကို ယနေ့ (၄.၅.၁၉) စနေနေ့တွင် အမှတ်(၂၄၂) အထက်ပုစွန်တောင်လမ်း၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ စက်ဆန်းတွင် ....
MEDEX Visit to FAME Pharmaceuticals
MEDEX/MYANLAB 19 (Myanmar’s Official International Medical & Pharmaceuticals Equipment & Supplies Exhibition/ Laboratory & Instrumentation Technology Show) ပြပွဲကို မြန်မာနိုင်ငံဆေးဝါးနှင့်ဆေးပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများအသင်း၏ ပံ့ပိုးမှုအဖြစ် ....
MPMDMA မှ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးထံသို့ သွားရောက်တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးစဉ်
မြန်မာနိုင်ငံဆေးဝါးနှင့်ဆေးပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများအသင်းမှ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးထံသို့ သွားရောက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစဉ် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၁၅)ရက်နေ့ ရုံးအမှတ်(၄) နေပြည်တော် ရှိကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံဆေးဝါးနှင့်ဆေးပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများအသင်း(MPMDMA)၊ မြန်မာနိုင်ငံဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း(MCCPMD) တို့မှ 🔹COVID-19 ကပ်ရောဂါ၏ နောက်ဆက်တွဲ အမှန်တကယ်တွေ့ကြုံနေရသော တင်ဒါလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ပတ်သက်သောအခက်အခဲများ၊ ....
ရေဘေးသင့်ပြည်သူများ၏ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက် ရန်အတွက် လှူဒါန်းစဉ်
ရေဘေးသင့်ပြည်သူများ၏ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှူလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နိူင်ရန်ရည်ရွယ်၍…….. ” မြန်မာနိုင်ငံဆေးဝါးနှင့်ဆေးပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများအသင်း (MPMDMA)”မှ စုစုပေါင်း ငွေကျပ် (၂၀) သိန်းအား ယနေ့ (၁၈-၈-၁၉) တနင်္ဂနွေနေ့ တွင် “ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန(MOHS)”သို့ ....
Covid -19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး လုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုရန် လှူဒါန်းခြင်း
မြန်မာပြည်သူ၊ ပြည်သားတွေအတွက် အုပ်တစ်ချပ်သဲတစ်ပွင့်အလှူ….. ▪️ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး လုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုရန်အတွက်…… “မြန်မာနိုင်ငံဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများအသင်း (MPMDMA)” နှင့် “မြန်မာနိုင်ငံဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း (MCCPMD)” တို့ ပူးပေါင်း၍ အသင်းဝင် ....
MEDEX’18 & MYANLAB’18 Exhibition Co-organizer with MPMDMA
ျမန္မာႏိုင္ငံေဆးဝါးႏွင့္ ေဆးပစၥည္းထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္းမွ co-organizer အျဖစ္ က်င္းပေသာ MEDEX’18 & MYANLAB’18 ျပခန္းမ်ားသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ပါေမာကၡေဒါက္တာ ခင္ေဇာ္မွ (၂၄.၈.၂၀၁၈) ေသာျကာေန႔တြင္ ....
Seminar for Intellectual Patent Law concerning
MPMDMA အသင္း၏ မိတ္ဆက္ျခင္း အခမ္းအနားႏွင့္ ေဆးဝါးအသိဉာဏ္ပစၥည္း မူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ပက္သတ္၍ ေဆြးေႏြးပြဲ အခမ္းအနားအား စက္မႉဝန္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ား တက္ေရာက္ ခ်ီးျမႇင့္ျခင္း အမွတ္တရပံုရိပ္မ်ား ....
Pharma QC Microbial Testing Solultions Incorporation
MPMDMA အသင္း၏ 21.6.2018 UMFCCI တြင္က်င္းပခဲ့ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲ ပံုရိပ္မ်ား (21st, June ....
Phone : (95-9)44466 6796,
Pharmaceutical Research Department,
West Gyogone, Insein Road, Insein Township, Yangon, Myanmar
© 2018-2022 Myanmar Pharmaceutical and Medical Device Manufacturer Association (MPMDMA), All rights reversed.